टचलेस साबुन डिस्पेंसर वाणिज्यिक
घर / बाथरूमको नल / सेन्सर बाथरूमको नलहरू / WOWOW टचलेस साबुन डिस्पेंसर वाणिज्यिक
स्वचालित सेन्सर साबुन डिस्पेंसरले हात धुने बेलामा स्वचालित र मात्रात्मक हात धुने तरल पदार्थ बाहिर धुउन सक्दछ, र स्पर्श नगरी हात सफा गर्न साबुन तरलको प्रयोग गर्न सक्दछ, जुन धेरै सुविधाजनक र स्वच्छ छ।
महामारीको कारण, उदाहरणका लागि COVID-19 को प्रकोप जस्तै, हामी बुझ्छौं कि हाम्रो स्वास्थ्य नाजुक छ र हामीले सँधै संक्रमित हुनको लागि हाम्रो स्वच्छताको देखभाल गर्नुपर्छ। र अरूलाई संक्रमित गर्न होइन। विशेष गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा हामी स्वच्छताको बारेमा पूर्ण रूपमा सचेत हुनुपर्दछ, र भाइरस वा ब्याक्टेरिया फैलाउन रोक्न उपकरणहरू प्रदान गरिनु पर्दछ। आइटमहरू जुन प्रायः छोइन्छन्, जस्तै डोरकनब्ब्स र faucets, तिनीहरूलाई अक्सर कीटाणुमुक्त राख्न सफा गर्नुपर्छ। र महामारीको समयमा तपाईले सबै भन्दा माथि हात मिलाउनु हुँदैन। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईका हातहरू बारम्बार धुनु अति आवश्यक छ। जब तपाईले आफ्नो हात धुनुहुन्छ, ब्याक्टेरियामा कम फैलिन्छ र बिरामी वा भाइरस बाट संक्रमित हुनको लागि।
WOWOW मा हामी स्वास्थ्यको ख्याल गर्छौं र हाम्रा सबै उत्पादनहरू सँधै तपाईंको स्वास्थ्यको साथ मुख्य उद्देश्यको रूपमा डिजाइन गरिएको छ। यसैले हामीले यो स्पर्शविहीन साबुन वितरकलाई डिजाइन गरेका छौं तपाईका कर्मचारी र ग्राहकहरूका लागि पूर्ण सान्त्वना र साधनहरू प्रदान गर्नका लागि, र भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूलाई फैलिनबाट रोक्नको लागि एक सुरक्षित तरीका।
इन्फ्रा-रेड सेन्सरको साथ टचलेस साबुन वितरक
सार्वजनिक स्थानहरूमा तपाईं जीवाणुहरूसँगको सम्पर्कबाट बच्नको लागि आफ्नो हातले केही पनि छुनुहोस्। त्यसैले WOWOW ले इन्फ्रा-रेड टेक्नोलोजीको साथ यो टचलेस साबुन वितरक प्रदान गर्दछ। जब तपाईं यस टचलेस साबुन वितरकको मुनि आफ्नो हात थाल्नुहुन्छ, तपाईं केहि हात छुनु बिना, तपाईंको हातमा साबुन को एक उचित हिस्सा प्राप्त हुनेछ। कुनै टचलेस नलको संयोजनमा, तपाईं आफ्नो हातहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि जटिल चालहरू नगरीकन कुनै पनि कुरा छुनु हुँदैन।
WOWOW को टचलेस साबुन औषधालय विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै शौचालय वा किचन, उदाहरणका लागि कार्यालय भवनहरू, अस्पतालहरू, बैंकहरू, शपिंग मल्ल र अन्य धेरै स्थानहरूमा। यो टचलेस साबुन डिस्पेंसर उच्च प्रदर्शन सामग्रीबाट बनेको थियो सार्वजनिक स्थानमा लामो समय सम्म रहनको लागि। यस टचलेस साबुन वितरकको पनि कडा हात प्रयोग सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। केहि होइन, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले COVID-19 प्रकोप नियन्त्रण गर्न WOWOW को टचलेस साबुन वितरकमा भरोसा गरे।
मल्टीफंक्शनल टचलेस साबुन वितरक
मुख्य रूपमा यो टचलेस साबुन वितरक साबुन को लागी बनाइएको थियो। तर तपाईं यस इन्फ्रा-रेड सेन्सर वितरकमा कुनै पनि प्रकारको तरल पदार्थ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं या त यो कीटाणुनाशक, हात सेनिटाइजर, डिश वाशिंग तरल, वा सनस्क्रीनले भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दुई टचलेस साबुन डिस्पेन्सरहरू पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि एक हात साबुनले र अर्को एउटा कीटाणुनाशकको ​​साथ। यस मा तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु र कर्मचारीहरु लाई अधिकतम आराम प्रदान गर्दछ। कमसेकम तपाई विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाई भाइरल रोग र ब्याक्टेरियाहरूलाई फैलिनबाट बचाउन यथाशक्य गरिरहनु भएको छ।
यो टचलेस साबुन वितरक मूल रूपमा व्यावसायिक प्रयोगको लागि बनाईएको हो। जे होस्, तपाई यो स्वचालित डिस्पेंसर तपाईको घरमा पनि लागू गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाई आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउन चाहानुहुन्छ, यस टचलेस साबुन वितरकको साथ तपाई यसलाई अझ सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। या त तपाईं यसलाई साबुनले, वा कीटाणुनाशकको ​​साथ भर्नुहुन्छ, तपाईंको आफ्नै भन्सार अनुसार। यस टचलेस साबुन वितरकको एक न्यून डिजाइन छ, यो कुनै पनि भान्छा वा बाथरूममा फिट हुन सक्छ। यसले तपाईंको किचन वा बाथरूममा आधुनिक टेक्नोलोजीको राम्रो स्पर्श दिन्छ धेरै ठाउँ ओगटेको बिना।
टचलेस साबुन वितरकको डिजाइन गर्नुहोस्
WOWOW को टचलेस साबुन वितरक सुविधाजनक र स्वच्छ छ किनकि तपाईं साबुन वा हात सेनिटाइटर लागू गर्दा कुनै पनि स्पर्श नगरी स्वचालित रूपमा तपाईंको हात धुउन सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, स्वचालित सेन्सरको साथ यो टचलेस साबुन वितरकको एक उत्कृष्ट र कम्प्याक्ट डिजाइन छ। यसले ठाउँ मात्र बचत गर्दैन, तर यो दुबै सार्वजनिक स्थानहरूमा तपाईंको आफ्नै घर जस्तो राम्रो डिजाइन आइटम पनि हो। यो टचलेस साबुन वितरकले निश्चित रूपमा आधुनिक कम्पनीको रूपमा तपाईंको कम्पनी छविमा योगदान पुर्‍याउँछ जुन यसको ग्राहकहरू, कर्मचारीहरू र स्वास्थ्यको ख्याल राख्छ।
डिजाईन बाहेक, WOWOW ले पनि यो टचलेस साबुन वितरकको कार्यक्षमताका बारे राम्रो सोच्यो। प्रयोगको सहजता पक्कै पनि यो स्वचालित डिस्पेंसरको प्रमुख फाइदा हो। तर टचलेस साबुन डिस्पेन्सरहरूमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कुनै पनि गडबडी स्पिल बिना नै तरलको सही मात्रा प्रस्ताव गर्नु हो। WOWOW को टचलेस साबुन डिस्पेंसरको वितरण भल्भले तरलको मात्रा नियन्त्रित गर्दछ र ड्रिपिंग रोक्दछ। त्यसकारण WOWOW को टचलेस साबुन वितरकले तपाईंलाई जीवाणुहरूलाई अधिकतम ग्राहकको सान्त्वनामा, र कुनै अपशिष्ट बिना फैलिनबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
प्रयोगकर्ता मैत्री टचलेस साबुन डिस्पेंसर WOWOW को टचलेस साबुन डिस्पेंसरले डुअल इलेक्ट्रिक डिजाइन फिचर गर्दछ, किनकि यो कि त ब्याट्री वा DC पावर द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ। यसले यस टचलेस साबुन वितरकलाई प्रयोगकर्ता-मैत्री बनाउँछ र अपेक्षाकृत द्रुत रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ, नजिक भित्ता आउटलेट नभए पनि। तपाईं केवल डेक माउन्टमा एउटा सानो प्वाल ड्रिल गर्नुहुन्छ, र तपाईं कुनै पनी समस्या बिना यो टचलेस साबुन डिस्पेंसर स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। बाथरूम सिinkको भान्साकोठा अन्तर्गत तपाईले तरल आपूर्ति सजिलैसँग बदल्न सक्नुहुन्छ, र ती सबैलाई थाहा छैन। यस तरीकाले एस्थेटिक्सलाई कुनै पनि हिसाबले हानि हुने छैन र तपाईं यो न्यूनतम टचलेस साबुन वितरकको साथ पूर्ण सेवा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ।
यसका सबै उत्पादनहरू जस्तै, WOWOW ले उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न कुशल उच्च-टेक प्रविधि प्रयोग गर्दछ। र यसको कुशल खरीद र अत्यधिक स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाहरूको कारण, WOWOW ले यो टचलेस साबुन वितरकलाई उचित मूल्यमा प्रस्ताव गर्न सक्दछ। WOWOW मा हामी हाम्रा उत्पादनहरू र हामी संसारभरिबाट हाम्रा ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने गुणवत्तामा गर्व गर्दछौं। त्यसकारण हामी तपाईलाई-बर्षे पूर्ण वारेन्टी अवधि प्रदान गर्न आश्वस्त छौं। यदि तपाइँको टचलेस साबुन डिस्पेंसरले प्रदर्शन गरेन जुन तपाइँले प्रदर्शन गर्न अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको टचलेस साबुन वितरकलाई कुनै समस्या बिना बदल्नेछौं।
यसका साथै WOWOW ले-०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंलाई कुनै कारणले यो टचलेस साबुन वितरक मनपर्दैन भने, हामी तपाईंलाई सोधेको कुनै प्रश्न बिना मात्र फिर्ता गर्नेछौं। यस तरीकाबाट तपाईले उन्नत इन्फ्रारेड सेन्सर टेक्नोलोजी अपनाउन सक्नुहुनेछ माध्यमिक क्रस संक्रमण जोगिन कुनै जोखिममा छैन। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जब तपाईं हाम्रो टचलेस साबुन वितरकको अधिक मात्रामा अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई छुटको प्रस्ताव गर्नुहोस्।
संक्षेपमा टचलेस साबुन वितरकको फाइदा:
• उच्च-टेक इन्फ्रारेड टेक्नोलोजी
Either कि त साबुन, कीटाणुनाशक वा हात सेनिटाइजरले भर्न सकिन्छ
• आधुनिक डिजाइन
। उच्च प्रदर्शन
Commercial दुबै व्यावसायिक र घर प्रयोगको लागि
स्वचालित साबुन डिस्पेंसरको प्रश्न र उत्तरः
(१) Q: म पुष्टि गर्न चाहन्छु कि यसमा ब्याट्री चाहिदैन।
A: तपाईं AC पावर सप्लाई छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, ब्याट्री चाहिदैन।
(२) प्रश्न: यो कसरी साबुन "स्रोत" वा साबुनको बोतलमा जडान हुन्छ? के यो मन्त्रिपरिषद्को भुईंमा बसिरहेको ठूलो बोतलमा जडान गर्न सकिन्छ?
A: नियमित बोतल १L हो, जुन सीधा नियन्त्रण बक्स मुनि राखिएको छ। हामीसँग L एल बोतलहरू पनि छन्, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको भाडा सामान महँगो हुनेछ। तपाईको बोलेट संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईको आवश्यकता अनुसार किन्न सक्नुहुन्छ। हामीले केवल बोतल र नियन्त्रण बाकस बीच पाइप लम्बाउन आवश्यक छ। दुबै 1L र 5L प्रयोग गर्न सकिन्छ, र ती जमीनमा राख्न सकिन्छ।
()) Q: कुन प्वाल आकार आवश्यक छ? मसँग पहिले नै मेरो काउन्टरमा म्यानुअल साबुन वितरकको लागि प्वाल छ।
A: प्वाल आकार: 25-35mm।
SKU: टचलेस साबुन औषधि -२ विभाग: बाथरूमको नल, सेन्सर बाथरूमको नलहरू टैग: डेक माउन्ट गरियो, मोशन सेन्सर, टचलेस फोमिंग साबुन
ब्रास, क्रोम, लिक्विड स्प्रे